Ogaden News Agency (ONA) – Dagaalkii Itobiya oo ku soo urursaday Brobagaanda Qaawan
Dagaalkii Itobiya oo ku soo urursaday Brobagaanda Qaawan
Posted by ONA Admin	/ September 16, 2013
Brobagaanda (dacaayad) sida la ogsoonyahay waxaa u adeegsada inuu ku dagaalgalo midka labada daraf ee ishaya dareema in macnawiyaadka (moraalka) ciidankiisa iyo taagerayaashiisa uu aad uga hooseeyo darafka kale, ama uu gaadho heer uu maleeyo inay soo dhawaatay guuldaradiisa. Itobiya Hawgalkii Cobolle ka dib waxaan la soconaa inuu xisbiga u taliya Itobiya ee TPLF u arkay inay ONLF hayso wadadii ay ku qabsadeen Adisababa sidaa darteed ay go’aansadeen inay dagaal wajiya badan leh ku qaadaan. Waxaana ka mid ahaa dagaalkaa midka Brobagaandada oo loo qoondeeyay misaaniyad furan. Waxay Itobiya la kaashatay arintaa aqoonyahano ku xeeldheer hawlaha dacaayadda waxayna heshiis ay la gashay shirkado reer Galbeed ah gaar ahaan kuwa Mareykan iyo Ingriis ah. Maxaa lagula taliyay;
1-Inay Itobiya abuurto dacaayad caalamka laga iibiyo oo ah; Waxaa caddaynaya (Proof) inay Itobiya heshiis iyo wadahadal diyaar u tahay A – B- C !!
2- Inay Itobiya abuurto dacaayad caalamka laga iibiyo oo ah; ONLF ciidan ahaan waa laga adkaaday intii ka dambaysay hawlgaladii ay qaadeen ENDF (Ethiopian National Defense Force) 2007dii.
3- Inay Itobiya ka shaqayso siday u kala furfuri lahayd Jaaliyadaha S.Ogadenya (Somali Ogaden Diaspora), oo ah cududda halganka.
4- Inay Itobiya abuurto ciidan dadka ah (Local Militias) horsocda oo ka garab dagaalama ENDF.
5- Inay Itobiya abaabusho bulshada gudaha si caalamka looga gado in ONLF aanay ku lahayn taageero gudaha dalka.
Itobiya talooyinkaa la siiyay waxay u fulisay qodob qodob, waxayna u diyaarisay qodob walba koox gooni ah oo ka kooban Somali iyo Tigree/wayaane oo daba socota lagulana xisaabtamo si gooreysi ah (Periodical). Waxaa aad nasiibdarro u ah in qodobadaa inta ugu badan fulinteeda loo xilsaaray qaar wadaadnimo sheeganaya oo ku talaxtagay diintii iyo dhaqankii oo hadda meel ay ka soo noqdaan garan la’ ka dib markay ku dhex fashilmeen bulshada, isla mar ahaantaa Itobiya ku hungowday gabi ahaan rajaday ka qabtay.
Hordhacaa yar ka dib, waxaan uga gudbi doonaa in aan si faahfaahsan uga bogano qodob walba siyaabaha ay Itobiya isugu dayday inay u hirgaliso iyo natiijada ay ka filaysay.